९ वर्षको अन्योल चिर्दै माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए सञ्चालनमा
काठमाडौं । ९ वर्षको अन्योल चिर्दै माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत् आयोजनाको विजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिएको छ । बिहीबार आयोजनको पावर हाउस रहेको किस्पाङमा नेपाल विद्युत प्राधिरकणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ‘स्वीच अन’ गरेर आयोजनाको विजुली औपचारिक रुपमा राष्ट्रिय ग्राडीमा जोडेका हुन् ।
आयोजनाबाट शुक्रबार ५ बजेबाट लगातार ७२ घण्टे परीक्षण उत्पादन हुनेछ । त्यो सफल भएपछि यसले व्यवसायिक उत्पादन थाल्नेछ ।
विद्युत गृहबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिएका छन । रसुवा र नुवाकोटमा निर्माण भएको आयोजनाको पहिलो युनिटबाट ३० मेगावाट उत्पादन सुरु भएको हो ।
‘विभिन्न समस्या झेल्दै रुग्ण बनेको आयोजनालाई निरन्तरको प्रयासबाट अब विद्युत् उत्पादन गरेका छौं,’ उनले भने । दोस्रो युनिट (३० मेगावाट)को असारभित्रमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनास्थलबाट काठमाडौंको मातातीर्थसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सकेर चार्ज भइसकेको छ ।
कुल अनुमानित लागत १२ करोड ५८ लाख डलर रहेको आयोजना नेपाल सरकार एवं प्राधिकरणको लगानी र चिनियाँ एक्जिम बैकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको हो ।
इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी) मोडलमा सिभिल विद्युत् गृह, बाँध, सुरुङलगायतका संरचना र इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा हाइड्रो मेकानिकलको काम गर्न चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीज (सिजिजिसी)सँग १४ जेठ २०६७ (२८ मे २०१०)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
१७ जेठ २०७१ (३१ मे २०१४)भित्रमा निर्माण सक्ने गरी सिजिजिसीसँग ८ करोड ९१ लाख ७८ हजार डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विगतमा विद्युत गृह भूमिगत बनाउने या सतही बनाउने विवाद, क्षमता बढाउने निर्णय लगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण ढिलाई भएपछि म्याद १६ असार २०७३ (३० जुन २०१६)सम्म थपिएको थियो ।
भूकम्पले गर्दा आयोजनाको निर्माण तालिका झनै प्रभावित भएको थियो । भूकम्प र पहिरोले काबु बाहिरको परिस्थिति (फोर्स मेजरं) उत्पन्न भएपछि प्राधिकरणले आयोजनाको म्याद १७ वैशाख ०७६ (३० अप्रिल २०१९) सम्म थप गरेको थियो ।
भूकम्प र पहिरोले बाँध स्थलको दायाँ(बायाँ र प्रवेश मार्गको विभिन्न स्थानमा क्षति पुर्याएको थियो । सरकारले पहिरोको रोकथाम र सडक मर्मतको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो ।
नेपालमा नक्कली नोटको बिगबिगीः ४ पक्राउ
ठमेलका व्यवसायीको ३ करोड उठाएर दिव्यमन्त्र सहकारीका सञ्चालक फरार
नेपालको कूल बजेटभन्दा व्यापार घाटा ठूलो
नयाँ करको घोषणासँगै अमेरिका–चीन ‘व्यापार युद्द’ फेरी चर्कियो
साम्राज्ञीको हट किस !
कान्तिपुर फिल्म एकेडेमीको ‘म’, निर्देशकमा परिच्छेद सेन
शिल्पाको पहिलो श्रीमान सार्वजनिक
अभिनेत्री नीताको ‘माया’ पक्कापक्की
छवि र शिल्पाको विवाह खारेज हुने !
मेयरले ३० लाख पाउँदा सोही घटनामा परेका नरेश भने जिउँदो लास बनेर सड्न बाध्य
अमेरिकी ग्रिनकार्डवाला दाहाल कसरी बने अष्ट्रेलियाको राजदूत ?
भूमाफियाले जग्गासंगै ४० मन्दिर गायब बनाए
आजका पत्रपत्रिकामा छापिएका कार्टुनहरू
देशै हल्लाउने एउटा शंका: हल्ला हो कि साँच्चै हो ?